Qaramada Midoobay (UN) oo Sacuudiga ku Eedaysay Xasuuqii Soomaalida ee Badda Yeman – Radio Daljir
Qaramada Midoobay (UN) oo Sacuudiga ku Eedaysay Xasuuqii Soomaalida ee Badda Yeman
Luulyo 27, 2017 4:50 g 1
Sida ay qortay warbaahinta ALJAZEERA, baarayaasha Qaramada Midoobay ayaa WARBIXIN aan weli la shaacin ka diyaariyey xasuuqii diyaaradaha dagaalka Sacuudiga ee helikobtarka ay xasuuqeen Soomaali qaxooti ah oo saaran doon maraysa badda Yeman. Warbixinta oo ah 185 bog waxaa shalay oo Arbaco ahayd isha saaray warbaahinta Reuters.
Xasuuqa ayaa dhacay bishii Maarso, waxaana la xasuuqay 42 qof oo aan waxba eersan, aan ka ahayn in ay saarnaayeen doon maraysa badda aagga Yeman. Dhawaaca xasuuqa Sacuudiga ayaa lagu qiyaasay afartameeye, waxaan doonta saarna dad kor u dhaafaya 140 qof.
Baarayaasha Qaramada Midoobay ayaa si cad ugu eedeeyey in Sacuudiga iyo xulufadiisa oo ay ugu horreeyaan Imaaraadka iyo Masar ay leeyihiin masuuliyadda xasuuqa, aysanna is qarin karin ayaga oo isticmaalaya magaca “xulufo.”
Warbixintu waxay caddaysay in dadka lagu xasuuqay qoriga dhumucdiisu tahay 7.62mm ee saaran diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga ee helikobtarka.
Akshaya Kumar, Agaasime Kuxigeenka Arrimaha Xuquuqda Dadka, ayaa ALJAZEERA u sheegay in ay falkeeda galayaan sidii loo joojin lahaa hubka Sacuudiga laga iibayo ee loo isticmaalo in dad aan waxba galabsan oo danbi gelin lagu xasuuqo.
Warbixinta ALJAZEERA halkan riix.
Taangi Ciidamadda Masar oo Dul Fariistay Gaari Qarax laga soo Buuxiyey (daawo)
Suadi arbia waa arxan laway runtii